WONDERFUL UNIVERSE: သုခရိပ်မြုံ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာ (၃)
သုခရိပ်မြုံ HIV ကူစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်များ ဂေဟာအတွက်၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေစပြီး အလှူခံပေးနေခဲ့တာခုဆို စာရင်းပိတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်နေ့နားနီးလာခဲ့ပါပြီ။လှူဒါန်းထားကြတဲ့ လက်ဝယ်ငွေရရှိပြီးထားတဲ့ အလှူရှင်တွေရဲ့ စာရင်းကို မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့ ထပ်မံဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စုစုပေါင်း သိန်း(၄၀)ပတ်ဝန်းကျင်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သိန်း(၅၀)လောက်ရအောင်လှူချင်ပါသေးတယ်။စာရင်းမပိတ်ခင်လှူချင်ကြသူများရှိဦးမလားပေါ့ ၊မလှူလိုက်ရမရှိလေအောင် နိဗ္ဗာန်ဆော်ထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အခုဆို အမေရိကား၊ စင်ကာပူ၊မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအလှူရှင်တွေစုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ သုခရိပ်မြုံကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထပ်ထပ်ပြောနေရတာများနေပြီဖြစ်ပေမယ့်ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းထပ်ပြောပါရစေဦး။အခုလို စိတ်ပါလက်ပါ မေးမြန်းကြ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြ မေးလ်တွေဖေါ်ဝပ်လုပ်ပြီး အလှူငွေကောက်ခံပေးကြသူ နိုင်ငံအရပ်ရပ်က ညီအကိုမောင်နှမ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအားလုံး ကိုအိန္ဒြာက သုခရိပ်မြုံကိုယ်စား ရောဂါကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးလေးတွေကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းစိတ်၏ကိုယ်၏ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အထိလက်ဝယ်ငွေသားရရှိထားပြီးတဲ့ စာရင်းလေးကိုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။1) ကိုမင်းသုခ- S$ 1002) မ မနော်ဟရီ-- S$ 1003) မိုးကုတ်သား- S$ 504) ဖိုးစိန် - S$1005) ကိုဝင်းဇော်လှိုင် + အိန္ဒြာ - S$1006) Mr. Neo+ Ms. Lucy - S$ 2007) မနန်းဧကရီ - S$1008) မေသူ - S$509) မေဇင် - S$2010) ကိုဇော်မျိုးအောင် - S$5011) ကိုဇင်မင်းသူ+မခိုင်ခိုင်ဇာ - S$5012) ငွေအိမ်စံ - S$15013) မမီး(မိုးသောက်ကြယ်) - S$5014) လိမ္မော်+ချစ်သူ - S$3015) နန်းသန္တာ - S$2516) အဆိပ်ခွက် - S$2017) နွေးနေခြည် - S$2018) မြတ်ဖုန်းမို - S$5019) Zephyr - S$10020) ယဉ်ယဉ်ထွန်း -S$3021) Khant Khant Chein - S$5022) မယ်လိုဒီမောင် - S$ 5023) ကိုသုခ+မမေကဆုန် - S$2024) MHZ+KZPK - S$3025) သက်နိုင် - S$1026) ကိုသောင်းစံ+မပိုးရည်မွန် - S$3027) ကိုမင်းမင်း+မအေးလေး- S$3028) ဟန်သီဆု - S$5029) ကိုဇာနည်+ယုယု S$ 10030) သိရိထွန်း - S$ 10031) ကိုရန်နိုင်+ မနေခြည်ပွင့် - S$ 1532) ဖန်နေ၀န်း - S$ 3033) အိုင်လွယ်ပန်+အမရာ US$ 3034) နီနီနိုင် S$ 10035) မို့မို့ရှိန် S$ 3036) ဒေါက်တာ ဥာဏ်+မ၀ါဝါခိုင်မင်း မိသားစု (ဂျပန်) -S$ 7037) Major SawMyat Min(Retired)+Daw Khin Lin Min Family - S$5038) ယုယုထက် - S$5039) ကိုလင်းသန့် + မထက်ရီ - S$5040) ပိုင်သူချစ် - S$5041) အေးယုမွန် - S$5042) မြတ်သန္တာအောင် - S$5043) ကိုဗညာသိန်း - S$5044) အေမွန်အောင် - S$5045) ကိုပိုင်စိုးအောင်+မ၀င်းကြည်တင် - S$5046) ခိုင်ဇာမွန် - S$7047) ဇော်မျိုးမင်း - S$2548) တိုးတိုးထိုက်လင်း - S$5049) ကိုနောင်နောင်လတ်+လဲ့မိုးသွင် - S$5050) ကိုမင်းရဲဖုန်း+မနိုင်နိုင်ထွန်း - S$1051) မသင်းသက်အေး S$1052) မနီလာထက်ထက်အောင် S$1053) မမိုးမိုးထိုက်လင်း S$1054) ကိုဖြိုးမောင်မောင်ဝင်း S$1055) မခိုင်စန္ဒာလှမြင့် S$1056) ကိုဝင်းနိုင်+မခင်မာချို မိသားစု S$5057) ဥမ္မာကျော် S$2058) ပွင့်လေးညို S$1559) ကိုဥာဏ်ဝင်း+မနန္ဒာထွန်း S$ 5060) နှင်းနွယ်ရွှေ S$1၀61) သန္တာလှိုင် S$1၀62) ကိုလှဝင်းအောင် + မယဉ်ယဉ်မြင့်63) စိမ်းစိမ်းမိုး S$5၀64) ကိုနှင်းမြိုင်+ မသီတာဝင်း S$5065) ရီနိုမာန် S$3၀66) မိုးခါး S$3၀67) ဆောင်းချမ်းမိုး S$2၀68) ဦးခင် S$5069) မဥမ္မာထွန်း S$5070) ကိုမင်းမင်းဦး S$5071) နန်းအေးမြတ်မွန် S$3072) ကိုမောင်မောင်ညွန့်S$2073) နှစ်နှစ်-S$2574) ရေတမာ S$2075) ဦးပေါ S$5076) ကိုသစ်ကောင်းအိမ် US$10077) ကိုဆောင်းယွန်းလ US$5078) ခရေတွန် US$50079) မယ်ကိုး S$9080) မြစ်ကျိုးအင်း S$10081) အဖြူရောင်နတ်သမီး S$10082) ကိုဝဏ္ဏ၀င်း+မမေဇော်ဦး S$5083) ကိုတင့်လွင် နှင့် ဇနီး S$3084) ပန်ဒိုရာ S$5085) ကိုနိုင်ဝင်း (ခ) ကိုဝင်းငယ် US$5086) ကိုသန်းစိုးနှင့်မဒါလီသိန်း US$5087) ကိုသိန်းအောင်ကျော် (ခ) ကိုရဲ US$5088) မသိင်္ဂီ (ခ) မမီးငယ် US$3089) Karen Bendaer US$2090) ကိုအောင်ဌေး US$4091) ကိုဇော်ဝင်း US$5092) ထွန်းနောင်မြင့် + သဲဆုမွန် S$10093) ထိုက်သင်ဇာဝင်း S$5094) သမီးလေးဇွန်သဲဆု S$5095) မမေဇင်ဦးလွင် S$12096) ညိုမီညွန့် S$2097) Julian S$100 98) စင်ကာပူ ဘလော်ကာမောင်နှမများ S$70 99) ဦးဇော်မင်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် S$50စုစုပေါင်း အလှူရှင် (၁၀၀) ဦးထံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၆၀) စင်ကာပူဒေါ်လာ(၄၂၁၅)တိတိ ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။သိန်း(၅၀)ရရင်စာရင်းပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်း)လှူဒါန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းမေးလ်မှာရောဘလော့မှာပါအသေးစိပ်သတင်းရေးပြီး အလှူရှင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းကိုလည်း ပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကို လေးစားခင်မင်စွာအိန္ဒြာ ( 065 91796542)eaindra.mm@gmail.com (ကူးယူဖော်ပြသူ : မိုးကုတ်သား)
သူတို့လေးတွေ အစား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အလှူရှင်တွေအများကြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ အလှူငွေထည့်ဝင်ကြတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ.ကလေးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီထက်မက လှူဒါန်းချင်ကြဦးမှာပါ။အခြေအနေပေးဦးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လည်း အများကြီး လှူဒါန်းချင်ပါသေးတယ်.ခုတော့...... အမှတ်တရ ကဗျာလေးရေးဘို့ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ဘိုဘိုရေ. (ကဗျာက စပ်တတ်တာကိုး.)း)အတည်ပြောတာနော်. စတာမဟုတ်ဖူး.
မြစ်ကမ်း၊ တံတား၊ ထိုင်ခုံလေးနှင့် အထီးကျန် လူတစ်ယေ...
မမဝါ မေးတဲ့ နောင်လာမယ့် ၅ နှစ်
ညီမလေး လိမ္မော်ချစ်သူ ရဲ့ ကဗျာလေးတွေ